Nyocha Huawei P8 Lite, anyị nwalere ya nke ọma | Gam akporosis
Huawei P8 Lite, n'ihi na ogo adịghị enwe nsogbu na ọnụahịa
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Huawei, Nyocha
Na ngwụcha Eprel ndị Huawei P8 Lite -…Huawei P8 Lite »/] ruru ahịa Spanish. Ekwentị mkpanaka nwere atụmatụ na njirimara nke na-ebuli ya elu nke etiti etiti ekele maka ike ya na ogo ya.
Mgbe m nwechara ekwentị a maka izu abụọ, nkwubi okwu m doro anya: ọ bụ enweghị mgbagha ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma na ahịa. Ya mere, ka anyị gaa n'ihu Huawei P8 Lite nyochaa, ekwentị nke ga-eme ka ndị asọmpi gị maa jijiji.
1 Ihe mara mma nke na-eme ka ndị na-asọmpi ya dị anya
2 Huawei P8 Lite, ịkụ nzọ na ngwọta ya
3 Ọkà okwu dị elu
4 Kensinammuo na ngwa ngwa interface, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezigbo uru maka ọnọdụ multitasking
5 Aka igwefoto kacha mma ị ga - ahụ n’etiti ekwentị
5.1 Ihe atụ nke foto
5.2 Nkịtị foto vs foto na HDR mode
6 Ihe kariri ndi mmadu
8 Mkpebi nke Editor
Ihe mara mma nke na-eme ka ndị na-asọmpi ya dị anya
Ugbua ịhụ igbe nke P8 Lite na ya minimalist imeweO doro anya na ndị otu nhazi nke Huawei etinyewo nnukwu echiche na akụkụ a. Mgbe ị buliri ngwaọrụ ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị ogo nke rụchara ya.
Atụ 143mm elu, 70,6mm ogologo na ya naanị 7,7 mm n'obosara, O doro anya na Huawei P8 Lite bụ ekwentị dị mma. Na gram 131 ya mere ka ọnụ ọgụgụ a bụrụ ngwaọrụ dị mfe.
Gịnịkwa banyere nhazi ya; nal P8 Lite etịbede stereotype na a ufọt ufọt nso ọnụ nwere ka n'etiti-nso risịrị; n'ihe banyere Huawei obere mkpuru, àgwà exudes ọ bụla pore.
Iji malite, Huawei P8 Lite nwere aru nwere nke polycarbonate n’agbanyeghi na imepụta mkpuchi azụ ya na-eme ka ọ dị mma imetụ ya aka, na mgbakwunye na igbochi ya ịpụ n’aka gị. E wezụga nke ahụ Oghere aluminom nke na-agbanye gburugburu ngwaọrụ ahụ na-enye ya ezigbo adịchaghị mma.
N'elu aka nri nke ekwentị anyị na-ahụ bọtịnụ ike na njikwa olu. All mkpọchi na-mere nke aluminom, àjà a àgwà ka aka nnọọ obi ụtọ. Anyị nwere ike ikwu na owuwu ya karịrị akarị.
Ha abuo micro SIM kaadị oghere na kaadị ebe nchekwa, dị na ala aka nri nke ọnụ, na-eji usoro ntụtụ ahụ iji wepụ kaadị. Otu nkọwa m masịrị m bụ eziokwu bụ na enwere ike iji otu oghere ahụ maka kaadi microSD na kaadi SIM nano. Isi ihe maka Huawei na ndị nrụpụta ndị ọzọ nwere ike i copyomi.
Ogwe 3.5mm dị na elu nke Huawei P8 Lite, ebe ndị na-ekwu okwu ụda dị na ala. Theda dị mma dị ezigbo mma, ihe ị ga-atụle. Ọ dị njọ na ọnọdụ nke ndị na-ekwu okwu na-eme ka anyị mgbe ụfọdụ na-eji ndagọ plọg tinye ụzọ ọdịyo, budata mbenata ogo dị mma. A ndudue ọtụtụ emepụta na-eme, ma ndudue niile na niile.
Anyị enweghị ike ichefu banyere igwefoto, dị na azụ aka ekpe. Rịba ama na igwefoto anaghị apụta ìhè ma ọlị, na-agbaso usoro ahụ dị ntakịrị na echiche nke ima nke Huawei P8 Lite weputara.
Huawei P8 Lite, ịkụ nzọ na ngwọta ya
Ihuenyo P8 Lite mejupụtara a 5-anụ ọhịa IPS LCD panel nke na-enweta mkpebi nke 1280 x 720 pikselụ na 294 dpi. Eziokwu bụ na ogo dị ezigbo mma, na-enye ọtụtụ agba nwere agba dị egwu. Na mgbakwunye, Huawei na-enye gị ohere ịhazi ọnọdụ agba agba, na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịkwalite ụda nke ihuenyo ka ọ masị ha.
Banyere akụkụ nlele, na nyocha anyị Huawei P8 Lite emeela nke ọma, na-enye dịgasị iche iche ma na-enye ya ohere iji ya mee ihe na gburugburu ebe ọ bụla: n'agbanyeghị agbanye anwụ, ọ ga-enwe ike ịhụ ihuenyo ahụ n'enweghị nsogbu, ihe m na-enwe ekele maka ya.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye akpachapụghị anya na-ahapụ ekwentị n'akụkụ igodo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike imebi ihuenyo, nwee obi ike. Na Corning ozodimgba iko 4 nchebe oyi akwa na integrates n'ihu panel nke P8 Lite ga-ezere ọtụtụ scares. Onwe m, abụ m otu n'ime ndị ahụ ma na nke a, mgbe izu abụọ nke ojiji kpụ ọkụ n'ọnụ, njedebe ahụ enwebeghị mmebi ọ bụla.
N'okpuru mkpuchi ahụ anyị na-ahụ ụdị nke nhazi ụlọ: HiSilicon Kirin 620 isi asatọ na a elekere ọsọ nke 1.2 GHz na 64-bit ije. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a dị ike ARM Mali-450 GPU na 2 GB nke RAM, o doro anya na Huawei P8 Lite bụ ezigbo ọnụ.
Su 16 GB n'ime ebe nchekwa Ọ ga-ezute karịa mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, mana ọ bụrụ na ezughị, ị nwere ike ijide n'aka: oghere kaadi SD SD ga-enye gị ohere ịgbasa ROM ekwentị ruo 128 GB.
Itinye nọmba na tebụl m ga-agwa gị na AnTuTu enwetawo ihe 34808, akara ngosi mara mma na nke ahụ na-egosi na Huawei P8 Lite bụ ekwentị dị ike maka oke dị na ya. Mana ihe dị mkpa bụ otu esi akpa agwa na akwụkwọ. Na ebe ngwaọrụ ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia nwere ike inye ara.
Iji malite, P8 Lite na-arụ ọrụ dị ka silk, na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ iwe iwe. Agbalịrị m egwuregwu ndị chọrọ ọtụtụ ihe, dị ka Modern Combat 5 ma ọ bụ Real Racing na ekwentị na-akpa àgwà zuru oke. Naanị ma ọ bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-enwetụ ọkụ, ihe na-adịkarị na ekwentị ụfọdụ, yabụ agaghị m echegbu onwe m nke ukwuu banyere akụkụ ahụ.
Ọkà okwu dị elu
Dịka onye ọrụ nke HTC One am a bit picky about the sound issue. Imirikiti ọnụ na-emechu m ihu na nke a, ọ bụ ezie na Huawei P8 Lite tụrụ m n'anya maka mma. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ndị na-ekwu okwu ha erughị ogo BoomSound nke ndị na-emepụta Taiwan, na ọnọdụ ha pụtara na ị nwere ike ikpuchi ha n'amaghị ama, anyị ga-amata arụ nnukwu ọrụ na nke a.
Sistemụ gị Nkọwapụta nke ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi (Smart Power Amplifier) ​​na-egbochi mbelata ụda mgbe ị na-ege egwu ọ na-achọpụta nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ na njupụta iji nye ụda dị elu.
Na nkenke, otu n'ime akụkụ ndị ahụ na-eme ka Huawei P8 Lite pụọ na ndị na-asọmpi ya. Nke ahụ dị mma.
Kensinammuo na ngwa ngwa interface, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezigbo uru maka ọnọdụ multitasking
Oge eruola ikwu maka naanị otu akụkụ dị njọ na achọtara m Huawei P8 Lite: interface ya. Ọ bụ eziokwu na ekwentị mkpanaaka a na - arụ ọrụ Android 5.0, onye Asia na-eme omenala interface EMUI 3.1. Nhazi enwere ike idozi ya nke n’enye gi ohere idozi otutu ihe ichoro ime ka ekwenti gi ichoro.
Ezie na ọ bụ eziokwu na EMUI 3.1 na-enye ezigbo arụmọrụ, na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkwụsị, nhọrọ multitasking na-ewe ezigbo iwe. Eziokwu nke ịhụ ihe kachasị nke ngwa anọ mepere emepe na ịnwe gafee windo dị iche iche iji chọta ngwa ịchọrọ ịmeghe nwere ike iwe.
E nwere oge Ọ dịkwuo mfe iji gaa na menu mbụ wee chọọ ngwa anyị chọrọ iji karịa iji uru nke ịba ụba. Nsonaazụ na-akpasu iwe, mana nke anaghị adaba na ahụmịhe onye ọrụ, nke ka dị mma.
Na nloghachi anyị ga-egosi ụfọdụ nkọwa na-adọrọ mmasị; Iji malite, P8 Lite na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ụfọdụ, dịka igwefoto ma ọ bụ egwu, site na ịme mmegharị ahụ dị mfe na ihuenyo ahụ. Mmetụta dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na onye nrụpụta China nwere -eji n'ime FM redio dị ka ọkọlọtọ na Huawei P8 Lite, nke m tụlere otu n'ime ihe ndị bụ isi na ekwentị ọ bụla kwesịrị ịbụ ọkọlọtọ.
Aka igwefoto kacha mma ị ga - ahụ n’etiti ekwentị
Onwe m ka igwefoto dị ka otu n'ime ihe kachasị mkpa na ama. Huawei P8 Lite na-agbaso nke a. Isi ụlọ ya guzobere site a 278 megapixel Sony IMX 13 BSI lens (f / 2.0 oghere na 28mm wide angle) ya na eriri ọkụ abụọ na-enye arụmọrụ dị mma, na-enye gị ohere ịhazi ọtụtụ oke dịka ISO, nguzo ọcha, saturation, ikpughe, iche ma ọ bụ nchapụta.
Na mgbakwunye na ịnye ụdị dị iche iche, Igwefoto kachasị nke Huawei P8 Lite na-enye usoro ọrụ na-atọ ụtọ:
Panorama: Na-enye gị ohere ịme foto panoramic site na isonye ọtụtụ foto n'otu oge na-akpaghị aka na nsonaazụ dị egwu.
Foto kacha mma: rụọ ọrụ a ị ga - enwe ike iweghara ọtụtụ njide n'otu oge ma họrọ foto kacha mma
Ihe ederede: mgbe iwere njide na ọnọdụ a ị ga-enwe ike itinye ihe ederede. Iouszọ dị egwu iji zipu ekele ma ọ bụ ekele.
Ọnọdụ HDR: ọnọdụ HDR nke na-enye gị ohere ijide agba nke foto mara onye ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ị ma otu esi eji ya nke ọma, ihe dị iche ga - eme ka ọ masị gị. Ga-ahụ ọtụtụ ihe atụ nke uru ọ bara na foto ihe atụ dị n'okpuru.
Total Lekwasịrị Anya: Site na itinye nhọrọ a n'ọrụ anyị ga - ejide ya, mana anyị nwere ike iji sọftụwia nhazi nke Huawei P8 Lite rụọ ọrụ nke ọma iji lekwasị anya n'ihe ọ bụla nke foto ahụ. Otu nnukwu na n'ezie bara uru nhọrọ.
Agbalịrị m igwefoto na gburugburu ebe dị iche iche ma nsonaazụ ya abughi afọ ojuju. Banyere gburugburu nwere ezigbo ọkụ, dịka ụbọchị anwụ na-acha, ihe oyiyi ọ were bụ nke zuru oke, àjà a nkọ na a larịị nke zuru ezu na-ama elu-ọgwụgwụ igwe.
Otutu n'ime ihe ndia gha aghaghi ikwu magburu onwe oyiyi post nhazi ọrụ nke Huawei P8 Lite. Dị ka ọ dị na omenala maka ekwentị mkpanaaka, mgbe ị na-ese foto na gburugburu ọkụ ọkụ, mkpọtụ ahụ na-apụta.
Ihe atụ nke foto
Nkịtị foto vs foto na HDR mode
Naanị ma achọpụtara m bụ na igwefoto Huawei P8 Lite nwere nsogbu na-elekwasị anya n'ebe dị oke mkpụmkpụ, mana na nkenke, enwere m ike ịsị na Igwefoto Huawei P8 Lite bụ otu kachasị mma na ahịa ma na-azacha ekwentị ọ bụla dị nso ya.
Ihe kariri ndi mmadu
N’oge na-adịghị anya ụdị nsọpụrụ dịpụrụ adịpụ na ahịa Europe ahapụwo nnukwu ụtọ n’ọnụ m n’ihi nnwere onwe nke njedebe ndị m nyochara. Ma, Huawei P8 Lite ga-ezute na nkebi a? Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ naghị eru ọkwa ọkwa Honor, ekwesịrị m ikwu nke ahụ arụmọrụ ya karịrị afọ ojuju. Na gam akporo 5.0 na-erepịa batrị na-enweghị obi ebere.
Na obere ojiji, P8 Lite ejirila ụbọchị abụọ zuru oke. N'ihe banyere iji nlezianya mee ihe, na-egwu egwuregwu ruo nwa oge, na otu awa ma ọ bụ otu awa na ọkara na Spotify na ịpịpụta ihuenyo site na netwọk mmekọrịta na ọdịnaya multimedia, nsonaazụ ahụ ka mma, karịa ma ọ bụrụ na anyị echebara echiche na integrates a Batrị 2.200 mAh.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a, Huawei P8 Lite ejirila ihe karịrị 32 awa, ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya na smartphone taa. N'ezie, n'abalị n'ụgbọelu, nke na-abụghị atụmatụ ịnata ọkwa mgbe m na-ehi ụra. Akụkụ ọzọ ebe P8 Lite na-apụta ìhè ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya.
Mmetụta ndị ahụ enweghị ike ịbụ ihe ziri ezi. Mmetụta dị mma, ihu dị ntakịrị na aka dị adị nke masịrị gị nke ukwuu, igwefoto dị mma na arụmọrụ kacha mma. Kedu ihe ọzọ ị ga-arịọ? Ọnụ ego a gbanwere.
Idtụle na Huawei P8 Lite na-efu euro 269Ọ bụ ezie na ị na-achọ ntanetị ị nwere ike ịchọta ya dị ọnụ ala karịa, enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụ eze nke oke ya na otu n'ime nhọrọ kachasị adọrọ mmasị ịtụle.
€228 a €269
Obere ihe ntanye na imecha ihe kacha mma Huawei P8 Lite
Obodo kwụụrụ nke ekwentị dị nso ụbọchị abụọ
Igwefoto 13 megapixel ya kachasị mma na nso ya na otu kachasị mma na ahịa
Ọnọdụ nke ndị na-ekwu okwu nwere ike ime ka anyị gbochie mmepụta mgbe ị na-eji ụfọdụ egwuregwu
Ọnọdụ multitasking nke EMUI 3.1 interface dị ezigbo arụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei P8 Lite, n'ihi na ogo adịghị enwe nsogbu na ọnụahịa
Ihe 106 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo Ndewo…. Amaghị m ma m ga-abụ nnu ahụ mana enwere m ihe ntụrụndụ maka Huawei ... Ugbu a enwere m Ascend P7 ma ọ bụ ihe arụ, ahụrụ m egwuregwu n'anya ma ana m ebi na lag na-aga n'ihu, yana ndị enyi nwere Galaxy S3, dị ala n'ụzọ ọ bụla na-esote nke m, ha enweghị lag, na-ekwu maka otu egwuregwu ahụ ... Maka ihe ndị ọzọ ha tinyere, Chinese bụ China ... Anaghị m etinye 1 euro karịa na mobile China.
Anọ m na-anwale ya ụbọchị ọzọ, eziokwu ahụ bụ na maka ọnụahịa ọ dị m ka obere. M ga-azụta G2 tupu nke a P8 Lite karịsịa n'ihi na Huawei oyi akwa dị egwu na ọ na-adị ee ma ọ bụ ee, ọ dị njọ karịa nke Samsung.
elu ugwu dijo
Ọfọn, enwere m otu Ascend P7 mobile na enweghị lag, amaghị m egwuregwu ndị ị na-egwu, mana ya na RF2012 dịka ọmụmaatụ nsogbu adịghị, otu ihe ahụ bụ ihe launcher, anaghị m eji nke na-abịa dị ka ọkọlọtọ emui, mana Smart obubata, ọzọ minimalist na ọ na-erepịakwa obere ego, na m na-agwa gị, efu lag, na nnọọ obi ụtọ na ya maka otu afọ.
Ihe ikwuru maka igwefoto Alfonso, nke bu eziokwu, nke P7 bu egbe ala.
Echere m na e nwere njehie n'ihi na P8 LITE na-agba ọsọ bụ KITKAT NA B WITHGH WITH NA ANDROID 5.0
Alfonso nke mkpụrụ osisi dijo
a gbanwere P8 Lite na gam akporo 5.0.
Ekele na ekele maka okwu gị
Zaghachi Alfonso de Frutos
Ndo Alfonzo. Ana m ebi na Venezuela, mmelite ahụ rutere site na ota ma ọ bụ enwere ụzọ iji aka gị mee ya
Enweghị nsogbu Alberto 😉
N'ọnọdụ gị, m na-atụ egwu na naanị nhọrọ ị ga - abụ ịgbanye ekwentị, mgbe ahụ ị nwere ike itinye ROM na gam akporo 5.0, mana ana m akwado ka ị chere ka mmelite ahụ wepụtara.
Miguel Angel Gamero kwuru dijo
Ejiri m eri a ka m ghara imeghe ohuru na otu okwu okwu ...
Nke a bụ ihe na-egosi na weebụsaịtị Huawei:
Ike nke ụda
Ndị na-ekwu okwu ọdịyo nke Huawei P8 Lite ga-akarị ihe ị tụrụ anya ya site na sistemụ nkwupụta ụda nwere ọgụgụ isi (Smart Power Amplifier) ​​nke na-egbochi mbelata ụda mgbe ejiri ngwaọrụ wee gee egwu ma, na mgbakwunye, na-achọpụta nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ na njupụta na nye ụda dị elu.
Na mgbakwunye, nkewa nke ndị na-ekwu okwu hi-fi na-egbochi ọnwụ nke ụda olu dị ala. Da ọ bụla doro anya, dokwuo anya, ma dokwuo anya.
Ejirila m akara akara ebe ọ na-ekwu maka ndị ọkà okwu, n'ọtụtụ.
Ọ nwere ike ịbụ mmeghe mana ọ na-ekwu na otutu. N'okwu m, ana m anụkwa naanị otu.
Zaghachi Miguel Angel Gamero oge
Ajuju ole na ole ... Anụla m / gụọ, na ọ bụ naanị otu n'ime ndị ọkà okwu na-arụ ọrụ, gbasara ịgbanye ekwentị ma tinye rom ọzọ, echere m na okwu ahụ dị mgbagwoju anya, ọ nweghị roms dị maka ekwentị a nke m mara nke a, m na-elekwa anya na HTCMania kwa ụbọchị, n'ihi na ihe mbụ m chọrọ ime ma ọ bụrụ na m zụta ya bụ iwepu ROM nke ọ na-eweta na-ebu ibu na mkpofu nke nhazi nke onwe, dị ka ụlọ ọrụ niile anyị na-aga ... ma hey, n'oge ahụ, ị ​​nweghị ike ime nke ahụ ... ma m na-atụ egwu na ịbụ onye nhazi nke aka ya, ọ ga-abụ ihe dị mgbagwoju anya ịhụ ...
Ọ dị mma, gbaghara ... karịa ajụjụ ole na ole, ha bụ nuances ... mana mgbe niile site na amaghị m, naanị m na-ekwu okwu na nchịkọta akụkọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnyekwu ozi gbasara ya ... Daalụ na mma ekele ...
Banyere okwu ROMS, ị dị mma na m na-achọ ma ọ dị ka P8 Lite siri ike ịkọcha, yabụ anyị ga-echere. N'ihe banyere ndị na-ekwu okwu, mgbe ị hụrụ mpaghara nwere oghere abụọ, ị nwere ike iche na e nwere ndị ọkà okwu abụọ, mana otu "ndị ọkà okwu" abụọ ahụ bụ igwe okwu. Ka o sina dị, agwala m gị na enwere m HTC One, ya mere na okwu ụda m wee nwee oke iwe, na ahụmịhe P8 Lite na nke a adịla mma.
Daalụ Alfonso maka nkọwa nke ọkà okwu na ụda ahụ. Eziokwu bụ na enwere m mmasị na ekwentị a zuru oke, ma ọ bụrụ na ị kwuo na ọ dị mma, echere m na o nwere ihe niile iji nwee ike dochie S3 m na-etinyeghị nnukwu ego, m ka ga-edozi esemokwu nke ndị Rom maka m, bụ ihe dị mkpa, yabụ aga m esochi ya anya ma ozugbo m hụrụ na ha were Rom, m ga-aga maka ya ... ekele
John okechukwu dijo
Ndewo Alfonso, ụbọchị ọma, enwere m p8 lite na n’oge na-adịbeghị anya. Ọ naghị ekwe ka m banye igwu egwu nke oge a 5, ọ banyere na obere. Aga m amalite egwuregwu ahụ, nke ọzọ ga-amasị m ịma etu m ga-esi gbanye p8 lite m, edere m na Colombia, enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka
Zaghachi John Gutiérrez
Anọ m na ọnwa 1 na ụbọchị ọ bụla na-enwekwu obi ụtọ na nzụta m, esitere m na iPhone, na mbụ enwere m ekwentị windo na ụmụ m nwekwara mobiles gam akporo, yabụ enwere m ụdị iji tụnyere ma nke a bụ nnukwu ekwentị, ndị enyi na ụdị na Ha bụ nnukwu ọkwa dị ka galaxy s4 ma ọ bụ ihe edeturu 2, mgbe ha nwesịrị ya ma hụ ya, ha na ụlọ ọrụ ha na-agagharị iji nweta ya hehe
Ndewo ekele, m ga-achọ ịhụ nke Huawei smartphone na-atụ aro m ka m tinye ya nke ọma ma ọ bụrụ na ọ dị mma karịa ka ọ na-abịa n'ahịa ...
site na ahụmịhe m, m ga-atụba P8 Lite ma ọ bụ P8 ma ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu ọnụ.
Kedụ ka m ga - esi mee ka nseta ihuenyo m na p8 Lite
pịa igodo olu na bọtịnụ ike n'otu oge ma ọ ga-ewe nseta ihuenyo.
Mazị Alfonso de Fruit .. Atụrụ m anya na ị nwere ike ịza m ajụjụ biko.Ọfụma p8 nwere mmadụ abụọ na-ekwu okwu, ha na-ekwu na ọ bụ naanị otu na-arụ ọrụ.Ọ bụ eziokwu.ama ọ ga-amasị m ịza gị, daalụ.
Ndewo Ramón, Abụghị m onye editọ, mana ịgụ ihe azịzawo ajụjụ a.
Site na Alfonso ekele maka nyocha ahụ, m na-achọ ozi gbasara ekwentị a ma mgbe m gụsịrị ya, m ga-azụta ya. Echiche kacha mma
Ajuju m gbasara gbasara ekwentị na ntaneti nke P8 Lite, ebe obu na m hdspa na ihe ndi ozo. Ihe bu okwu bu na iji ya tụnyere Ace 2 di mfe, nke ikpeazu nwere usoro ogbako ozo. Na 3g ma obu 4g. ?
Ọ ga-amasị m ịmara ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbanwe onye ọrụ na ekwentị mkpanaaka a, bụ na ajụjụ a nwere m ọfụma n'ihi na ọ nweghị web ọ na-aza ya.
Anọ m na-agbalị ịchọta nseta ihuenyo ruo ogologo oge na akụkọ ihe mere eme nke nnọkọ ahụ adịwo ukwuu kemgbe m mechara chọpụta otú m ga-esi mee ya.
Ajuju. Enweela m ebe nchekwa ọzọ na ekwentị mana mgbe m nwara ibudata ngwa ọ na-agwa m na ohere ezughị.Kedu ka m ga-esi gwa ya ka ọ wụnye ya na Sd memory?
ajuju ụbọchị ole na ole gara aga, azụrụ m Huawei p8 lite, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, enwere naanị nsogbu na whatsapp, enweghị m ike ịkekọrịta onyonyo m si na igwefoto ekwentị ahụ, enwere m njehie ... amaghị m ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka biko
Zaghachi na Paoooo
Na àgwà nke ndekọ vidiyo olee otú ọ dị na Huawei P8 Lite ma ọ nwere NFC ma ọ bụ na ọ bụghị ..
Oscar Diaz Marquez dijo
oburu na inwere nfc
Zaghachi Oscar Diaz Marquez
ndewo: otu ihe a na eme m mgbe m chọrọ ịse foto na whatsapp anaghị enweta ya… anaghị m ewere ya ozugbo !!!!!!
Ndewo, enweela m Huawei P8 Lite, enwere m ike ịsị na ọ bụ ezigbo ekwentị na asọmpi ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ama ama, ejiri m ya jiri ngwa email, ụfọdụ egwuregwu dị ka swiit anwụrụ, nchịkọta akụkọ foto, netwọk mmekọrịta, wdg, ọkachasị ndị ahụ.
Ihe ọghọm nke m nwere n'ihe gbasara ekwentị, bụ na agbanyeghị na emere m nhazi ahụ iji nweta ọkwa na-akpaghị aka, na-enwe ngwa m niile, ana m enweta ozi site na email m site na gmail, facebook na ngwa whats (ịkpọ aha ole na ole. ihe atụ); Otú ọ dị ngwa dị ka m yahoo mail, ma ọ bụ egwuregwu dị ka swiit anwụrụ, enwetaghị ificationsma Ọkwa na nwere imeghe ngwa na ya dị nnọọ emelitere na ificationsma Ọkwa na-abịa.
Ọ ga-amasị m ịmara ma ọ bụrụ na onye ọzọ a site na nke a, ma ọ bụrụ na ọ bụkarị maka ngwanrọ ha ma ọ bụ ihe nwere ike ịbụ.
Nkwupụta WhatsApp anaghị erute m
Ndewo enyi, na oyi akwa Huawei, m na-azoputa onwe m ka m na-etinye ọtụtụ mmemme nhicha ma ọ dịkarịa ala, ịnwere ike itinye njikọ na nchekwa ihu igwe na-ewe iwe, na onyonyo o yiri ka m nwere otu, ọ na-ele ya anya na m zụrụ otu ma ọ dịghị mma dị ka nke a, ọ na-anọ ebe dị anya site na nsọtụ, dị ka milimita abụọ karịa ma ọ bụ obere gburugburu ngwe na onye ọ bụla na-ekwu nke complazụ mkpesa banyere otu ihe ahụ,
Mgbe m gụchara okwu gị banyere ọdụ a, ekpebiri m ịzụta ya na kaadị SD 32G. N'agbanyeghị agbanyela kaadị a dị ka ndabara na nchekwa ahụ, a na-ebudata ngwa niile ahụ na ebe nchekwa dị n'ime ya ma ọ naghị ekwe m nyefee ọ bụla nke D. Ya mere, ebe nchekwa nke ekwentị mbelata na accelerated nzọụkwụ mgbe SD bụ kpam kpam efu. Have nwere ụfọdụ echiche ihe nwere ike ime. Daalụ nke ukwuu
Ndewo ọma. Enweela m Huawei maka ụbọchị 3 ma m hụrụ ya n'anya, mana achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ụfọdụ. Isi bụ na m amaghị otú deactivate blissful amụma keyboard. Amaara m na ọ nwere ike ịdị mma karịa blah blah, mana ọ bụ maka udo nke uche ịmara na m nwere ike wepu ya. M gbanwere Swipe maka Google otu ma exclamations na-apụta ma enwere m mmasị na ya. Ahọpụtawo m Huawei otu site na deactivating niile nhọrọ nke «Akpaaka mgbazi», «Amụma nke ọzọ okwu» ... Ya mere, m na-amaghị ma ọ bụrụ na ndị mobile nwere mmejọ.
Ihe ọzọ bụ na ahụla m na bluetooth ejiri aka ya rụọ ọrụ, nke a na-echegbu m obere n'ihi na m nyere ya na mberede, ọ bụ ezie na echere m na ọ bụghị. Mana agụọla m ọtụtụ okwu ndị mmadụ na-emebi mgbe ha jikọrọ ya na igwe okwu ụgbọ ala, amaghị m.
N'ikpeazụ, ha na-ekwu maka ọdịda "mpị abụọ". Amaghị m ma ọ bụrụ na ha na-atụ aka na nhọrọ ị kpọghee (nke pụtara na enwere ike ịme otu a, a nwabeghị m ya ugbu a) ma ọ bụ karịa n'oge ede na keyboard, ị nwetara mkpụrụedemede 2 n’usoro n’achọghị. Nke a emeela m, mana n'oge a ka m tinyere ya n'eziokwu ahụ bụ na m ka na-akwụ ụgwọ ya.
Enyemaka Cq bara uru, ndo maka ụgwọ ahụ 😉
Pedro Fernandez dochie ihe oyiyi dijo
Ndewo Miryam: Na mmeghe, ezigara m onye ọzọ okwu Enwere m nsogbu bluetooth na ụgbọ ala. Ọ na-ewe m ozi na ihuenyo ụgbọ ala dị ka LOW SIGNAL. O buru na enyere gi ihe osiso ma obu kwuo, biko kọọrọm. Enwekwara m Moto G na ụgbọ ala ọ na-arụ ọrụ zuru oke na enweghị njikọ. N'ihe banyere P8 ọ na-adịkarị. Daalụ n'ọdịnihu.
Zaghachi Pedro Fernandez
Jhon Jairo Morillo kwuru dijo
Ndewo, enwere m nsogbu na Huawei p8 lite bụ na mgbe m na-ekiri vidio na facebook, ihuenyo ahụ na-agbanyụ, amaghị m ihe kpatara nsogbu a. Daalụ.
Zaghachi Jhon Jairo Morillo
Italo Garcia dijo
Ndewo, enwere m nsogbu, huawuey p8 lite anaghị arụ ọrụ
Zaghachi Italo Garcia
Gini mere redio ji agbanyụ ma ọ ga - egbochi?
M natara Huawei P8 Lite na enwere m nsogbu: Mgbe m gbalịrị ijikọ wi-fi, m ga-enweta obere ihuenyo na nkuzi ka m wee nwee ike ịbanye na paswọọdụ rawụta mana keyboard anaghị apụta. Agbalịrị m otu puku ụzọ mana enweghị ụzọ keyboard ahụ achọpụtara ga-egosi na ihuenyo. Ma ebe ọ bụ na achọrọ m ijikọ na Internetntanetị maka ihe ọ bụla, enwere m ekwentị na-abaghị uru n'ihi na enweghị keyboard pụtara ebe ọ bụla. Ka anyị lee ma ị nwere ike ịgwa m ma m mee ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi jose maria
Johan Loyal dijo
ehihie ndị enyi ... Enwere m Huawei P8 Lite .. kedu ka m ga-esi budata vidiyo, ugbu a ọ bụrụ na ọ ga-eme ka m hụ ha, mana ọ gaghị ekwe ka m chekwaa ya na ebe nchekwa ekwentị na / ma ọ bụ na kaadị SD nke m na-adịghị ahụghị nhọrọ maka nke a, mmadụ nwere ike inyere aka ..
Zaghachi Johan Leal
Ndewo onye obula, esite na iphone 4 ma eziokwu bu na o juru m anya na o yiri haha, o bu ihe obi uto ka anyi mechara bulite egwu ozo n’ime folda n’enweghi obi ojoo iTunes
Nanị nsogbu m hụrụ bụ olu, dị oke ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere iphone nwere ekweisi. Ana m etinye oge dị ukwuu na njem ụgbọ njem ọha nke mere na ọ dị m mkpa ...
Ihe ngwọta ọ bụla?
Ndewo, naanị m zụtara P8 Lite na m ka na-achọpụta uru ọ bara, mana achọtara m onwe m na nsogbu ahụ anaghị m ege egwu nke sel m site na blu Bluetooth nke ụgbọ ala ahụ; O nweela ihe jikọrọ ya na enwere m ike ịkpọ oku ekwentị, mana agbanyeghị otu m siri chọọ ya, enweghị m ike ịchọta otu esi ege egwu m n'ụgbọ ala; onwere onye mara ka esi eme ya?
Enwere m p8 Lite na ọ bụ ezigbo etiti, mana ọ bụrụ na ị ga-azụrịrị họrọ g2.
Enwere m Huawei p8 Lite, n'okpuru ngwa iji gbochie ngwa, dị ka AppLock na ndị ọzọ nwere otu ọrụ nke igbochi na inye nzuzo gị watsapp na ndị ọzọ na ọ naghị egbochi, o nwere njehie, ọ dịghị onye na-arụ ọrụ, mgbe m meghere na ihuenyo blocker Ọ na-akwụsị na-arụ ọrụ, M na-agbalị ọtụtụ na otu ihe ahụ na-eme ,,,,,,,,, ị maara nke ọ bụla na-arụ ọrụ a cell?
Achọrọ m ịma ma ọ dị mma itinye ngebichi nchedo
Enweela m Huawei 630 Ma kemgbe ụnyaahụ enwere m P8 lite na ebe m bụ onye ọhụụ na ihe ndị a, mmadụ nwere ike ịgwa m ebe igodo MENU dị? Ana m atụ ụjọ na anaghị ahụ ya n'ụzọ ọ bụla.
Echefuru m ikwu na ahụghị m ụzọ ọ bụla ntuziaka ma ọ bụ ntuziaka na ọrụ niile ma ọ bụ otu esi etinye ma ọ bụ wepụ ihe na P8 Lite, dị ka ịtọ ụda maka otu WHATSAPP m na onye ọzọ maka ndị enyi m. A ndu ga-eme m ihe ọma.
Daalụ nke ukwuu maka ịbịara m.
Ndewo onye ọ bụla. Agam agwa gị ntakịrị ihe banyere ahụmịhe m na ekwentị a dị.
1-Ka anyị kwuo maka ọsọ - Ekwentị dị oke mmiri maka ọnụ ahịa ya, ekwentị mkpanaka nke karịrị m Moto G3 ebe m nwere ma eziokwu ahụ bụ na ebutụbeghị m mobile dị ka nke a ogologo oge.
2 - Ndị na - ekwu okwu - Dika ihe edere na - egosi, nwata nwoke na - ewe iwe nke ukwuu, mụ onwe m kwa, ọ na - eju m anya ebe ọ bụ na m na - abụ onye na - akwado Huawei mgbe niile ma ha na - emechu m ihu na ụda, mana nke a bụ eziokwu oke.
3-Imewe - Igwe dị oke ọkụ, mara mma, nke nwere akụkụ ya zuru oke. Ekwentị dị oke ọnụ ahịa n'akụkụ niile.
4-Igwefoto - Ọfọn n'oge a enwere otu ihe na-ewute m. Ebe ọ bụ na ọ nweghị otu igwefoto dị ka P8 Grande, ọ bụ ihe ga-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nso nso nke Huawei, mana ogo ya bụ 100% zuru oke na-enweghị obi abụọ. Otu ụbọchị m were NIKON NA MY Huawei m were otu foto ahụ ma enwere ike iji eziokwu tụnyere igwefoto na ihe niile.
Enweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu, ịzụta nnukwu ekwentị a dị mma maka ọnụahịa ya.
Enwere m nsogbu na P8 Lite. Enwetara m mmelite, B170, m wụnye ya ma kemgbe ahụ ịntanetị, ozi, ma ọ bụ whatsapp anaghị arụ ọrụ maka m… ma ọ bụrụ na m jikọọ na Wi-Fi. Onwere onye maara ka esi edozi ya?
Ndewo, enwere m Huawei P8 Lite na naanị nsogbu m nwere bụ ụda ... Ma ọ bụghị na ndetu dị elu, mana na ndị dị ala, ebe ọ bụ na ihe atụ mgbe ị na-edekọ olu olu na WhatsApp ma na-ege ya ntị na ala olu ọ na-ada ụda ọjọọ, olu ahụ edoghị anya ikwu opekempe.
Ọ bụrụ na otu ihe ahụ mere mmadụ maọbụ ọ bụrụ na ị gwa m ka m mee ihe, ana m ekele gị.
José Arturo Perez N dijo
Ndewo, onye na-enyere m aka, P8 Lite Radio m na-akụda, ha emezigharịrị ya na enweghị ihe ọ bụla, daalụ maka enyemaka niile ị nwere ike inye m
Zaghachi Jose Arturo Perez N
Ndewo, enwere m nsogbu na Huawei p8 Lite m, azụrụ m ya 5 ụbọchị gara aga ma achọrọ m ịse foto panoramic n'otu ụbọchị ahụ m zụtara ya mana naanị m ga - enweta mbido foto ahụ, ọ naghị esi na ndị ọzọ , Kedu ihe m nwere ike ịme?
Jonathan inkwell dijo
Enwere m ekwentị site na ụbọchị abụọ gara aga na nke kachasị njọ n'ụwa ..
Younweghị ike ide ngwa ngwa leta ahụ ka ana-emegharị .. Ana m ana batrị ugboro abụọ n’ụbọchị… jọgburu onwe ya… € 199 na-efu m ..
Zaghachi Jonathan Inkwell
Ndewo Jonathan na foreros,
Site na menu, họrọ foto panoramic. Obere igbe ga-egosi n'aka ekpe na akụ dị n'etiti (ọ bụ igosi na ị ga-emerịrị / gbanwee igwefoto gaa n'aka nri iji were foto ndị na-eso ya). Pịa pịa ya ma were foto izizi; mgbe ahụ ị gbanwere igwefoto nwayọọ nwayọọ ruo mgbe ị dakọtara obere gburugburu n'ime ebe ọcha na-egosi na ihuenyo; n'oge ahụ, ebe ọcha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ wee were foto ọzọ; na na na ka ọtụtụ ka ị na-eche adaba; N'ikpeazụ, ị pịa mkpuchi ọzọ na igwefoto na-ese foto niile foto wee weghaa ha na otu panorama. Enwere m olileanya na ọ na-arụ ọrụ maka gị.
Andrea Ochoa dijo
Ndewo, nsogbu m bụ agba ọ gosipụtara na ihuenyo na foto ahụ ka dị, ha abụghị agba nkịtị, dịka ọmụmaatụ ọbara ọbara dị ka ihe na-acha odo odo na agbalịrị m ịgbanwe ọnọdụ ntọala agba agba ma ọ nweghị ihe dị mma. Onwere onye nwere ike inyere m aka?. Daalụ nke ukwuu
Zaghachi Andrea Ochoa
Ọnye na -bụ Mauricio Becerra Castro? dijo
Otu ajụjụ, ị dozie nsogbu gị, ebe m nwere otu, ọ bụrụ na ị dozie ya, biko nye m azịza ya.
Zaghachi Mauricio Becerra Castro
sonia esteban dijo
Onweghi onye ga aza ajuju ndia di n’elu !!! ??
Enwere m nsogbu abụọ, otu amaghị m etu esi wedata olu nke amamọkwa WhatsApp, nke ọzọ bụ etu m si agụ na nkwupụta ndị gara aga, mgbe m dere akwụkwọ ozi abụọ.
Ebe ọ bụ na enwere ọgbakọ a, m ga-arịọ gị ka ị zaghachi.
Zaghachi Sonia Esteban
N'ime ụbọchị atọ nke iji, sistemụ arụmọrụ agbaala, were ya!
N'ihi na ọ nweghị ngwa nchekwa na-arụ ọrụ, enwere m P8 Lite na ọ kachasị mma, naanị ihe m na-amaghị bụ ihe kpatara ya ji enwe nsogbu nzuzo ahụ, ị ​​nwere ike ịza ajụjụ m?
A doro anya na m Huawei p8lite.
Ọ bụ 16 gigs, na ihuenyo ọ na-agwa m na m nwere 10 gigs eji na m nwere 1.7g free dị.
Obere ihe ncheta ị nwere?
Kedu ihe m ga - eme n'okwu ahụ ...
Alfonso de Frutos, Achọrọ m ịjụ gị otu esi eme m igbochi data ndabere, mana ịkpa oke site na ngwa. Nke ahụ bụ, achọtara m nhọrọ a na Data Traffic Management-> Network Applications, mana ọ na-eme ya maka ngwa niile ọnụ yana m ga-achọ inwe ike ịme ya maka ụfọdụ ee ọ nweghị ndị ọzọ, ọmụmaatụ: inwe ike ịhapụ WhatsApp na-arụsi ọrụ ike ma gbochie Facebook. Ọ nwere ike? Ọ ga-amasị m ịmekọrịta na nke a. Daalụ
Cristina 4 dijo
Ndewo, gbaghara m, aha m bụ Cristina na m nwere Huawei p8 lite, atụfuru ekwentị ndị gara aga enwewokwa Huawei mana mmejọ m na-ahụ bụ nghọta nke ihuenyo ebe ọ bụ na mgbe ọ na-ede ya na-ewe iwe nke ukwuu. otutu na ọ jọgburu onwe ya n'oge edere, Amaghị m ihe m ga-ebudatara ọtụtụ puku kiiboodu mana enweghị m ike idozi ihe ọ bụla, ọ na-eme onye ọzọ? Enwere ihe ngwọta ọ bụla? Agarawo m ya n'ụlọ ahịa ahụ, ha na-ebo m ebubo maka ilele ihuenyo ahụ ebe ọ bụ na ha na-ekwu na n'ezie mmiri efedila ma ọ dịghị ka na azụrụ m ya kaa akara ma ozugbo m mepere ya ọ dị otu a .. Biko nyere ya aka wee iwe.
N'ebe a na nkata a, ọ dịghị onye na-aza .. M dị ka Cristina gị, enwere m ya ihe na-erughị otu ọnwa na site na ụbọchị mbụ ọ na - emegharị mkpụrụ akwụkwọ abụọ ...
Edere m n'elu na-ekwu otu ihe ahụ na akwụkwọ ozi ahụ ugboro ugboro. A zụtara ya na mediamarkt. N’ikpeazụ ọ gbanwere na ha resịrị m ya ejiri. Enyere m ya azụ
Huawei ọrụ dijo
Ndewo, enwere m Huawei p8 Lite, olee otu ị ga-esi wepu ụda ọ na-eme mgbe ị gbanyere ya?
Zaghachi Onye ọrụ Huawei
Naiara akwụ ụgwọ dijo
Nnọọ! Amaghi m na oburu m onye nani jinx mana mobile a na enye m otutu nsogbu ... na onwa 1 ruo 2 o “nwuo” na mberede ma ugbua adighi ejiko m na Wi-Fi na ulo , naanị na netwọk a na router nsogbu abụghị ... Ana m eji ekwentị a apụ. Ọ bụrụ na mmadụ enye m azịza, enwere m ekele
Nzaghachi na ụgwọ Naiara
Ndewo otu ajụjụ. Ọ ga-amasị m ịmara ma enwere ike ịhazi Huawei p8 Lite ka bọtịnụ ịlaghachi dị n'akụkụ aka nri kama n'akụkụ aka ekpe. Daalụ
agustin fernandez Island dijo
Ọ ga-amasị m mmadụ inye m nghazi maka ihe kpatara ekwentị m Huawei Huawei p8 Lite ji akpọchi ma anaghị ege ntị na kọntaktị m kpọrọ, m gbanyụọ ya wee gbanye ya, etinye m pi wee rụọ ọrụ ọzọ, nke nwere ike ịbụ Obere nkọwa ga-amasị m
Zaghachi agustin fernandez isla
hugo gonzalez dijo
Ndewo, enwere m p8 Lite, o nwere ndị ọkà okwu abụọ, ndị 2 ga-ege ntị ma ọ bụ otu n'ime ha bụ ihe ịchọ mma? Ọ ga-amasị m ma ị zaa, daalụ
Zaghachi hugo gonzalez
Enwere m otu, ọ dị mma ma enwere m nsogbu ịwụnye swiiti ọkacha mmasị m swiit na-agwa m na ọ dakọghị na ụdị nke akụrụngwa m na-eme iji wụnye ya.
Aghọtaghị m na onye ọ bụla na-ekwu banyere ogo dị mma na ekweisi nke smartphones na nyocha, m na-achọsi ike banyere ya. Mmadụ enwere ike ịkwado igwe na-adịkarị n’etiti nwere ezi ụda dị mma na ekweisi? Ndi okwu n’emeghi m ihe. Kedu ka P8 Lite si eme n'akụkụ a? Daalụ
Ndewo ọma! Enwere m P8lite mana naanị otu ọkà okwu na-arụ ọrụ m mgbe m na-ege egwu, ọ bụrụ na ọ na-eme onye ọ bụla?
Na kwa mgbe ị na-ezipụ ozi WhatsApp ọ naghị ada ụda
Enwere m P8lite mana ọ bụ naanị ọkà okwu aka ekpe na-arụ ọrụ maka m, n'otu ụzọ ahụ, m nwetara ya, ọ bụ ihe ọhụrụ
Enweghị m mmasị na ọnọdụ ọkụ na-enwu gbaa ị nweghị ike ịhụ ihuenyo ma otu n'ime oghere mgbawa na-enwe nkwarụ mgbe niile.
Enweghị m ike ịhụ ọnụọgụ nke ọkwa WhatsApp, mmadụ nwere ike inyere m aka?
onye maara ka m si eme redio nke Huawei p8 m anaghị arụ ọrụ na wi-fi
Ndewo Rusel. Enweghi m nsogbu na redio, etinyere m na ntị ntị, gbanye redio na ihe mgbaru ọsọ. Ọ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ana m atụ aro ka ị gbanwee ụda ntị ahụ ka ọ na-arụ ọrụ dị ka antenna ma ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọ ga-enye gị nsogbu.
Enwere m P8 Lite.
N'ozuzu ya nke ọma
Achọtala m ihe ndọghachi azụ. Mgbe m jikọtara Bluetooth na ụgbọ ala, ọ na-enye m ozi mberede LOW BT SIGNAL.
E mesịa, mgbe obere oge gasịrị, ọ na-agbake wee KỌRỌTA ọzọ.
Enwekwara m Moto G, nke m na-enwetụbeghị ụdị nsogbu a.
Ọ bụrụ na mmadụ maara otú e si edozi ya, m ga-enwe ekele maka nkwurịta okwu ahụ.
giron uhie dijo
ndewo ndị enyi, ajụjụ niile jikọtara ekweisi na ekwentị p8 Lite ekweisi anaghị arụ ọrụ ebe ọ bụ na ebu ụzọ nwalee ekweisi na ekwentị ọzọ nke na-arụ ọrụ, mana na p8 Lite ọ naghị arụ ọrụ na ọtụtụ ekweisi anwalela ma ọ bụ otu ihe ahụ
Zaghachi giron rojas
Luis de la Torre dijo
Enwere m huaweyp8-na ndị na-ekwu okwu na-anụ naanị n'akụkụ aka ekpe karịa. Ike na nke dị n'akụkụ aka nri bụ ihe nkịtị ma ọ bụ nwee nsogbu
Zaghachi Luis de la Torre
Ndewo, gbasara ihe ị nụrụ naanị otu ọkà okwu bụ n'ihi na ọ nwere naanị otu, nke ọzọ bụ igwe okwu dị ka ọkà okwu nke abụọ. Enwerem ajuju: onye obula nke gbaliri micro sd memory kariri 32 Gb? Ma ọ bụrụ na ọ na-akwado SDXC? Ma ọ bụ naanị Pịnye SDHC ??
Ndewo, otu ọnwa gara aga, azụrụ m P8 Lite, enwere m nnukwu nsogbu mgbe m jiri nhọrọ iji kesaa data site na ekwentị m jikọtara na Wi-Fi, yana PC desktọọpụ m, ọ na-ewe minit ole na ole na dsps the ekwentị na-agbanyụ n’enweghị ma ọ bụ karịa. Ọ na-achọsi ike n'ihi na pc m enweghị nhọrọ wifi, mana m na-echekwa na cell ga-emebi site na ịgbanwụ n'ụzọ dị otú a, onye maara ihe kpatara ya, biko, nwanne m nwanyị nwere nokia mobile pig na ee ọ nwere ike ịkekọrịta data na enweghị nsogbu ọ bụla na ekwentị ya.
Fredis quintana dijo
Ndewo, olee otu ị ga-esi achọ ịmata ma otu onye n'ime gị nwere otu ajụjụ ahụ? Have nwetụla mgbe ị nwara ijikọ na ebe nchekwa USB? Ọ naghị amata m, m na-ekwu, ọ nwere nkwarụ ma emechaa ọ naghị ekwe m rụọ ọrụ ya
Zaghachi Fredis Quintana
Ndewo, ekwentị ekwesịrị inwe 2gb nke ebule mana 1gb na-eji sistemụ na nke a na-eme m naanị ka ọ bụ ya na ndị ọzọ? Xfa onye nyere m aka na nke a
Otu onye kọwaara m ihe kpatara na enweghị m ike ịnyefe ngwa na micro sd m? M na-etinye otu n'ime 8 ọ dịghị ihe ọzọ ma ka m ike imelite ma ọ bụ ibudata ihe ọ bụla n'ihi na ekwentị na-adịghị na ebe nchekwa mgbe niile
Ha doziri ekwentị m ma mgbe m tinyere sd, ọ nweghị ihe pụtara, amaghị m etu m ga-esi nwetaghachi ozi na kaadị ahụ, daalụ.
Luis Fernando Gonzalez Drada onye nhazi ihe oyiyi dijo
Enweela m P8 Lite Ale 23 Double Sim Card maka otu ọnwa, enwere m ike iji simcards ma n'otu oge ahụ jiri kaadi microSD, ma ọ bụ ọ bụrụ na m ejiri simcard ahụ, enweghị m ike iji MicroSD na ntụgharị ihu? maka azịza gị, mmakọ si Bogotá Colombia.
Zaghachi Luis Fernando Gonzalez Drada
Gabriela Buele Abad dijo
Ndewo, achọrọ m ịma ma mmepụta ụda dị na oghere abụọ na mpaghara ala?!
Zaghachi Gabriela Buele Abad
Ndewo, aka ekpe bụ ọkà okwu, aka nri bụ igwe okwu
Akara Lucero dijo
Chọrọ ịzụta p8 Lite? Ezi gogleen mbụ: p8 Lite WiFi nsogbu (ọtụtụ ndị nwere otu nsogbu). Ọ kwụsịghị otu ọnwa maka nwunye m ọ malitere ịda, ọ naghị ejikọ WiFi ọzọ, gbalịa nrụpụta siri ike, tinyegharịa ROM, achọrọ m ozi ebe niile na enweghị ihe ọ bụla. Akpanikọ emi enen̄erede oyom.
Zaghachi Marcos Lucero
Arbey chikwado dijo
Ndewonu ehihie oma !! Ihe na - eme bu na achọrọ m imeghari ọdụ microSD maka NanoSim mana ọ gaghị ekwe m .. ọ gaghị ekwe m .. gịnị ka m ga - eme n'ọnọdụ ahụ? Biko ị nwere ike nyere m aka !! Daalụ
Zaghachi Arbey solis
Héctor Hernández R. Onye dijo
Ngwa Google Earth dara n'ime sekọnd ole na ole ịnweta ya. Enwetala m ya na nsogbu adịghị edozi.
Zaghachi Héctor Hernández R.
Fabio Narvaez dijo
hello, otu ọnwa gara aga ha nyere m p8 lite na ọ rụrụ ọrụ nke ọma ụbọchị iri abụọ, ugbu a wifi anaghị arụ ọrụ, agụọla m ọtụtụ nkọwa banyere otu nsogbu ahụ, ọ bụ ihe ihere n'ihi na ọ nwere atụmatụ mara mma, mana ọ nweghị ike -atụ aro.
Zaghachi fabio narvaez
Ndewo, ihe mere n’oge na-adịbeghị anya, azụrụ m Huawei p8 lite wee. Achọrọ m ịma banyere batrị n'ihi na ọ na-adịgide naanị 6 ma ọ bụ 8 awa.
Ndewo, enwere m p8 Lite na ekwentị m agbagọla, ọ dị onye mere gị?
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi emeghe ekwentị ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na enweghị m ike ịchọta nhọrọ ahụ. Daalụ
Ehulatawo m ya, ọ naghị atụgharị. Ha na-agwa m gbasara ọrụ aka nke akwụkwọ ikike ahụ anaghị ekpuchi ya ... ekwentị bụ naanị afọ 1 ...
Site na p8 Lite m na-ekwu
M. Eugenia dijo
Nnọọ! Enwerem Huawei P8 ohuru. Ngwaọrụ agbanyụrụ na-ewe ọtụtụ batrị. Enwere ihe na - ekwu na redio na - arụ ọrụ ma anaghị m arụ ọrụ. Enwere mmadụ ike inyere m aka?
Zaghachi M. Eugenia
Ndewo m nwere Huawei p8 Lite na e nwere ihe na oriri batrị zuru ezu na-ekwu; redio na-arụ ọrụ ma ọ na-eri m nnukwu ihe. Anaghị m eji redio. Onye ọ bụla maara ihe ọ nwere ike ịbụ?
hello, enwere m Huawei p8 Lite, ọ ga-amasị m ịmata ka m ga-esi hụ sms m zitere
ndewo, onwere onye maara ka esi egbo nsogbu okpukpu abuo? mgbe ị na-ede, akwụkwọ ozi abụọ apụtaworị
Edgar Mc dijo
Ndewo ndị enyi, otu m nwere HUAWEI P8, Nsogbu sitere na USB USB enweghị m ike ịdefe faịlụ na PC, Ọ B BE Ọ B THAT NA M GA-EME IHE Ọ B,, KWES ITR IT NA Ọ B ONL NA-EME M THEB CHRAR Ọrụ, Onye nwere ike ime TRAS SITE NA FILI, I meela nke ukwuu
Zaghachi Edgar Mc
Abalị ọma, m ga-achọ ịma otu m ga-esi edozi foto n’abalị, ebe ọ bụ na ha na-apụta n’ọkụ ma jọọ njọ. Daalụ
Ọ ga-amasị m ịma otu m ga - esi dozie foto ndị gbara ọkụ? Daalụ
Nnọọ! Enwere m Huawei p8 Lite maka otu ọnwa ma ugbu a, a naghị anụkarị ọkà okwu karịa na mbụ. Daalụ n'ọdịnihu. Echiche kacha mma.
Nnọọ! Kedu ihe m ga - eme iji mee ka ọ dị ka ọ dị na mbụ?
Ndị ọrụ gọọmentị Amazon Cloud Drive bidoro na Storelọ Ahịa Play
Sony agaghị ere ahịa nkewa ama ya dịka onye isi ya